Shirka wada Xaajoodka oo War Murtiyeed u xaglinaayo Soomaliland ka soo baxay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Shirka wada Xaajoodka oo War Murtiyeed u xaglinaayo Soomaliland ka soo baxay
Shirka wada Xaajoodka oo War Murtiyeed u xaglinaayo Soomaliland ka soo baxay
Dowlada Jabuuti ayaa War-murtiyeed kasoo saartay shirkii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland maanta ku yeesheen magaalada Jabuuti.
Waxaa shirkan goobjoog ka ahaa xubnaha beesha caalamka, iyadoo uu shir guddoominayey Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Qoraalka War-murtiyeedka oo nuqul ka mid ah loo soo diray dqyniile .coe ayaa lagu sheegay in madaxda Soomaaliya iyo Somaliland ay isla garteen in la aas-aaso guddi farsamo oo ka kooban xubnaha wufuudda labada dhinac, si ay usii wadaan wada-hadallada.
Sida ku xusan War-murtiyeedka Waxaa la isla gartay in wada-hadallada labada dhinac laga sii ambaqaado arrimaha taagan ee labada dhinac ay horey isugu raaceen.
Inaan la siyaasadeynin kaalmada horumarinta iyo maal-gelinta ayaa sidoo kale ka mid ah qodobada ku xusan war murtiyeedka.
Qodobkan oo ahaa mid ay Somaliland daneyneysay ayaa haatan u muuqata iney ku guuleysatay, maadaama horey dowladda Soomaaliya u joojisay deeqdii Somaliland qasabna ka dhigtay in iyada loo soo mariyo maadaama ay tahay dowlada Somalia oo dhan loo aqoonsan yahay.
War murtiyeedku waxa uu ugu baaqay dhammaan beesha caalamka in ay hannaankan wadaxaajood taageeraan.
War murtiyeedka ayaa u muuqda mid aan nuxur badan laheyn oo kaliya ujeedadiisu aheyd in lagu muujiyo in shirkaas ay wax uun ka soo baxeen.
Guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa sheegay in lagu kala tagay shirkaas aysana ka soo bixin wax natiijo ah a dib markii Somaliland diiday in la wada hadlo shuruudna ka dhigtay in la fuliyo qodobadii ay labada dhinac horey ugu heshiiyeen.
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad uu ka jeediyey munaasabada furitaanka shirka waxaa uu beesha caalamka ka codsaday iney aqoonsi buuxa siiyaan Somaliland, isagoo xusay in shacabka Somaliland ay muddo dheer u soo dhabar adaygeen iney arkaan iney noqdaan umad la mid ah umaddaha caalamka oo leh dowlad madax banaan.
HOOS KA AKHRISO WAR MURTIYEEDKA OO ENGLISH KU QORAN:
Previous articleShirka Wadahadalada Soomaaliland Iyo Soomaaliya oo hadal uu Jeediyey Muuse Biixi oo sabab u Noqday in lagu kala Cararo
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Qudbad u muuqata Jawaab in ay u Tahay Muuse Biixi Ka jeediyey Shirka
Axmed Madoobe oo labo qodob ka dalbaday Xildhibaanada Jubbaland ku metela DF (Sawirro)
Ra iisal wasaarahii Hore Xasan Cali Kheyre iyo Gudoomiyaha Aqalka sare oo kulan qaas ah yeeshay
Somali government urged to take action against foreign agencies involved
l Shabaab claims to suicide attack have...
Kala qeybsanaanta Madaxweyne Farmaajo iyo Ra iisal waasare Kheyre oo si...
The men accused of killing and raping Hodan Shanlayste were unexpectedly...